१९ वर्षीया सपना रोका मगरलाई यो फेरि एक्कासी के आइलाग्यो यस्तो ? - Nepali in Australia
January 3, 2021 EditorLeaveaComment on १९ वर्षीया सपना रोका मगरलाई यो फेरि एक्कासी के आइलाग्यो यस्तो ?
बीबीसीले सार्वजनिक गरेको एक सय प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा पर्न सफल १९ वर्षीया सपना रोका मगर यतिबेला बिरामी भएर घरमा आराम गरिरहेकी छिन् । गत मंसिर ८ गते बीबीसीले सार्वजनिक गरेको एक सय प्रभावशाली र प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा १९ वर्षीया सपनालाई पनि छनोट गरिएको थियो। सपना सडकका बेवारिसेलाई खाना खुवाउने र बेवारिसेको अन्त्येष्टि गर्ने कार्यमा सक्रिय छिन्।
काठमाडाैं । संचारकर्मी रवी लामिछानेले न्युज २४ च्यानल छाड्ने भएका छन् । उनले छाड्ने भएपछि चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ बन्द हुने भएको छ । ‘सिधा कुरा जनतासँग’ न्युज २४ च्यानलमा ५ वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आइरहेको छ ।
रवी लामिछानेलगायतको एउटा समूहले नयाँ टेलिभिजन संचालन गर्ने तयारी गरेकाले कार्यक्रम बन्द हुने बताइएको छ । टेलिभिजनबाट लामिछाने लगायतको समुहले केहि समय अघि नै राजीनामा दिइसकेका छन् ।
नयाँ टेलिभिजन सुरू गर्ने तयारी पहिलेदेखि नै भएको र त्यसमा काम भैरहेकाले उक्त कार्यक्रम नयाँ टेलिभिजनबाट संचालन गरिने लामिछाने निकट एक संचारकर्मीले बताए । अहिले टेलिभिजनको काम अगाडी बढिरहेको हुनाले तयार हुन केहि महिना अझै लाग्ने बताइएको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
मृ’त्युको झूटो खबर बेहोरेका सुभाष आफ्नै मृत्यु दर्ता खारेज गर्न अड्डा धाउँदै